UKWENZA AMAQHINGA ALULA
Izibalo ngaphandle kokuba luncedo, kunokuba mnandi kakhulu; Kodwa xa sikwinkqubo yokufunda, sinokucinga okwahlukileyo; ukwenza yonke into ibe lula, namhlanje siza kukubonisa indlela yokwenza lula amaqhezu.
1 Yintoni eyenza lula amaqhezu?
1.1 Umzekelo olula wento elula yokwenza amaqhezu
2 Ungawenza lula njani amaqhezu?
2.1 Indlela yokuqala yokwenza lula amaqhezu
2.2 Indlela yesibini yokwenza lula amaqhezu
3 Amaqhezu ngamagunya
4 Ukwenza lula ukwenza amaqhezu ealgebra?
Yintoni eyenza lula amaqhezu?
Phambi kokuba sifunde ukwenza lula amaqhezu, kufuneka sazi ukuba yintoni iqhezu; kakuhle, ngamagama alula, singatsho ukuba iqhezu sisixa esahlulwe saba yenye into; okanye yintoni enye, sifumana iqhezu ngokwahlula inani libe ngamalungu alinganayo.
Kwaye ekubeni sithetha ngamaqhezu, sifuna ukucebisa ngenqaku elihle onokuthi wenze ngalo funda ngoncedo lwamaqhezu kubomi bemihla ngemihla.
Xa sithetha ngokwenziwa lula kwamaqhezu, sibhekisa kwinkqubo esiza kuthatha iqhezu ngayo, ukunciphisa amanani kunye nenani elingaphezulu kwaye ke sifumane iqhezu elincinci. Iqhezu elifunyenweyo liya kulingana nelokuqala; Oko kukuthi, iya kubonisa ubungakanani obufanayo, kodwa ngokumelwa okwahlukileyo.
Ukwenza lula amaqhezu, kuya kufuneka ukwahlula amanani kunye nenani elingezantsi ngenani elifanayo; Ngale ndlela, ukuba sizahlulahlula amanani (ngesithathu), idinomineyitha kufuneka yahlulwe kathathu. Le nkqubo yaziwa njengokunciphisa iqhezu.
Umzekelo olula wento elula yokwenza amaqhezu
Ukuze siyiqonde ngcono; Kumzekelo olandelayo siza kunciphisa iqhezu lama-24/30, masibone:
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukufumana inani apho sinako ukwahlula zombini amaxabiso; Eyona nto inengqiqo kukuba uqale kwelona nani lincinci, ezimbini (2); ethi kule meko ijongeke intle. Ke iqhezu ngoku liza kuba li-12/15.
Siza kuphinda inkqubo efanayo; kodwa kule meko, njengoko inye kuphela yamaxabiso eyahlulahlulwe kabini, emva koko siyakuthatha inani lesithathu (3); ukugcina iqhezu 4/5.
Kuba asinalo inani ngaphandle kwe-1, ngena kuyo ukuze uqhubeke ukwahlula izahlulo zethu; iyakuba ngu-4/5. Eli licandelo elingenakuchithwa, kuba iqhezu lethu langaphambili alinako ukwenziwa lula.
Amaqhezu alula athathelwa ingqalelo ukuba ayalingana; ukusukela, nangona zibonisiwe ngamanani amancinci, ziya kubonisa inani elifanayo kwinani elingezantsi, njengeqhezu lasekuqaleni. Ngale ndlela, sithathela ingqalelo ukuba iqhezu eliboniswe ngentla liqhezu elenziwe lula; Kuba imele ubungakanani obufanayo nemvelaphi, kodwa inamalungu ambalwa.
Ungawenza lula njani amaqhezu?
Ukwenza lula amaqhezu, zimbini iindlela; nantsi ke siza kuchaza nganye nganye kuzo; emva koko, xa sele uziqhelile zombini iindlela, unokukhetha eyona uyithandayo kwezimbini.
Indlela yokuqala yokwenza lula amaqhezu
Kule ndlela yokuqala, kuyakufuneka ukufumana ukwahlula okuqhelekileyo kwinani elingezantsi nakwidinomineyitha; ukwahlula kamva kubo bobabini, kude kungabikho sahluli siqhelekileyo; masibone umzekelo:
Sineqhezu lama-80/120, kwaye ukusukela omabini la manani ayalingana, kunokwenzeka ukuba uwahlule ngo-2; Ngale ndlela, iqhezu liya kuba ngama-40/60.
Kwakhona, kunokwenzeka ukwahlula ama-40/60 ngababini; Enkosi kuwo omabini amaxabiso ngokulinganayo, kwaye sishiyeke ngama-20/30.
Iqhezu lama-20/30 lisamile nangoku; Ke ngoko, siza kuthatha u-2 kwakhona njengomahluli oqhelekileyo, kwaye ngoku siza kuba ne-10/15.
Kule meko, i-10 lahlulahlulwe kabini, kodwa hayi i-15; emva koko, siyaqhubeka ukufumana ixabiso elahlula amanani omabini; le izakuba ngu-5, kwaye xa sisenza ulwahlulo, sizakufumana iqhezu elingafumanekiyo 2/3.
Xa sifunda nje, le ndlela inokuba ilungile; Kodwa njengoko siziqhelanisa, inokuba yinto edinisayo kwaye sikhethe indlela efanelekileyo; Injalo imeko yesibini, masibone.
Indlela yesibini yokwenza lula amaqhezu
Kakhulu, ngoku siza kuqhubeka ukucacisa indlela yesibini; apho inani elingezantsi kunye nedinomineyitha kufuneka yahlulwe ngeyona divisi (i-GCD) inkulu inye; Siza kuyenza sithathe njengomzekelo kwakhona iqhezu lama-80/120, masibone:
Kuqala, siza kubala i-GCF kuzo zombini i-80 kunye ne-120; Ngu 80 = 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 2 = 5 120 x 2 no 2 = 2 x 3 x 5 x 2 x 3 = 5 XNUMX x XNUMX x XNUMX.
Oku kulandelayo iya kuba kukuthatha abahluleli abaqhelekileyo phakathi kwe-80 kunye ne-120; eya kuba ngu-2 kunye no-5, apho kuya kufuneka ukhethe enye eneyona incinci incinci.
Kwimeko ye factor 2, eyona ikhupha eyona iphantsi ngu-2³, kwaye kwimeko yesi-5, lento ingangu-5¹; ngoko ke, siqinisekile ukuba i-GCF engama-80 no-120 ngu-2³ x 5 = 40.
Ke ngoko, sizakwahlula zombini inani elingezantsi kunye nedinomineyitha ngama-40; enokuguqula iqhezu lethu lantlandlolo elingu-80/120 libe liqhezu elingafumanekiyo 2/3.
Njengoko sibona, le nkqubo inokuqhubeka nokwenza lula inkqubo echazwe apha ngasentla; Kuba endaweni yokujonga isahlulelo esiqhelekileyo kancinci kancinci, kufuneka sijonge esona sahluli sikhulu kwaye siqhubekeke yonke inkqubo inyathelo elinye.
En el mundo ukusuka kwimathematics, siza kufumana iikopi ezahlukeneyo zamaqhezu; apho ezinye ziya kuba lula ukusombulula kunezinye; Kungenxa yoko le nto apha, siza kuchaza ngokufutshane ukuba njani yenza lula amaqhezu ngamagunya.
Kule meko, asizukusombulula imveliso yamagunya; kuba oku kuyakwenza ukuba iinombolo kunye nenani elingaphezulu kakhulu likhulu kakhulu kwaye ukwenza lula kube nzima ngakumbi.
Endaweni yoko, kuya kufuneka unike amandla iziseko zamagunya, ukuze usebenzise kamva iipropati zamagunya; Ngale ndlela, i-factorizations yenani elingezantsi kunye nedinomineyitha ziya kufumaneka ngokuthe ngqo, ukuze zibenze lula.
Ukwenza lula ukwenza amaqhezu ealgebra?
Ukuba le nto siyifunayo yile yenza lula amaqhezu ealgebraKufuneka siqale ngokwazisa ngenani elingezantsi kunye nedinomineyitha; Ngale ndlela, siza kwenza lula izinto eziqhelekileyo ezikhoyo phakathi kwezi zimbini. Njengakwimeko zangaphambili, iqhezu elifunyenweyo liya kulingana neqhezu le-algebraic yoqobo.
Kodwa sazi njani ukuba olu hlobo lwezinto kulula ngakumbi ukuluqonda ngemizekelo ebonwayo; siza kukushiya ividiyo, echaza indlela yokwenza lula amaqhezu e-algebra; Siyathemba ukuba iyakunceda, njenge nqaku.